Welcome to PhyoDayByDay.com! – phyodaybyday
April 3, 2017 December 4, 2018 Home / all / Welcome to PhyoDayByDay.com!
Like	12,150 Comments all, beauty, Style
Hello ! အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ
ဒီနေ့ အရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ သတင်းလေးတစ်ခု ကြေငြာချင်ပါတယ် ။ အဲ့ဒါလေးကတော့ ကျွန်မရဲ့ကိုယ်ပိုင် website လေးလွှင့်တင်လိုက်ပြီဆိုတဲ့ သတင်းလေးပါ ။
Website လေးရဲ့ လိပ်စာကတော့ phyodaybyday.com ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီထဲမှာ ထူးခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ ၊ နာမည်ကြီး #beauty brand တွေနဲ့ collaboration တွေ ၊ ကျွန်မ follower များအတွက် အမိုက်စား give away တွေပါဝင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် အားလုံးကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ ။
အခုဒီ video လေးကို Facebook မှာ like and share ပြုလုပ်ပေးတဲ့ follower တွေထဲက ၁၀ ယောက်ကို မဲနှိုက်ရွေးချယ်ပြီး နာမည်ကြီး skincare brand တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Dermalogica Myanmar ကပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ အထူးဆုလက်ဆောင်လေးတွေ စီစဉ်ပေးအပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် ။
Dermalogica brand က ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က စွန့်ဦးတီထွင်သူအမျိုးသမီးများအတွက် ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေပေးအပ်နေတာဖြစ်ပြီး ကျွန်မကိုလည်း ဒီအစီအစဉ်လေးမှာ ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေပေးထားပါတယ် ။
phyodaybyday.com မှာဆိုရင် ကျွန်မရဲ့ #Beauty Knowledge တွေ #Makeup#Tutorial တွေ #Skincare Tip တွေ #Lifestyle နဲ့ Fashion Idea တွေအပြင် ကျွန်မရဲ့နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုအကြောင်းအရာလေးတွေကို အမြဲ update လုပ် ဝေမျှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် ။
ဒီ website လေးကိုတာဝန်ယူ ရေးဆွဲပေးခဲ့တဲ့ Revo Tech Digital Agency (http://revotech.co) ကိုလည်း ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင် ။
အားလုံးပဲ phyodaybyday.com ကို လာလည်ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် ။ ကျွန်မရဲ့ follower တွေကောင်းသောနေ့လေးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေနော် ။
Love You !!! See You !!! #phyodaybyday